Ukubulala amagciwane otshwaleni nsuku zonke
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-初海
IManshan Chuhai Inn itholakala endaweni engcono kakhulu yokubuka ukuphuma kwelanga, futhi ungabuka ukuphuma kwelanga okumangalisayo olwandle usuka egumbini. Eduze nepaki ye-wetland, imizuzu engu-5 yokuhamba ngezinyawo ukuya olwandle, amagumbi akhethiwe anezingubo zokulala ezikalwe ngenkanyezi nezinto zikagesi, okukunikeza ukulala okunethezekile kanye nolwazi oluhle lokuhamba.
Indlu yezihambi ihlanganiswe nesitayela sesiqhingi esiyingqayizivele sase-Weizhou Island, futhi inenzuzo eyingqayizivele yokuphakama.Ngefasitela, ihlathi likabhanana eliluhlaza ligcwele izihlahla zikabhanana eziluhlaza, futhi kubonakala ukuphuma kwelanga okumangalisayo olwandle. Lapho kuhwalala, ubheka kude, uhlaka olucacile lwe-Xianyang Island lubonisa ukukhanya kwelanga elishonayo.
Lapha, ungashayela abangani, ubambe amagagasi, uthenge ukudla kwasolwandle ukuze ujabulele ukudoba kwesiqhingi, noma ungahambahamba uzungeza isiqhingi uwedwa, ucwiliswe ngumoya wolwandle nokukhanya kwelanga, futhi uzwe isitayela "sePenglai Island" iSouth China Sea.
Lesi sakhiwo sinegumbi elingamamitha-skwele angama-20, elisegcekeni, elinombono wengadi, lithule futhi likhululekile, alukho ulwandle, kodwa indlu yezihambi ingasolwandle, futhi ungabona ulwandle endaweni yengadi yomphakathi. lokhu impahla is kakhulu okusezingeni. umbhede kufanelekile abantu ababili e bukhoma. Indlu inezinsiza eziphelele, idizayini elula, isiphephetha-moya, igumbi lokugezela elizimele, kanye nezingubo zokuwasha nezinakekelo ezenziwe ngokwezifiso. Izingubo zokulala neminye imikhiqizo ibhekisela ekumisweni kwamahhotela abekwe inkanyezi, okukunikeza uhambo oluphelele nendawo yokuhlala.
Le ndawo itholakala e-Xiakeng Village ogwini olusempumalanga ye-Weizhou Island, eduze nendawo yokubuka ukuphuma kwelanga, phakathi kweWucai Beach Scenic Spot kanye neSonto LamaKatolika lasendulo.
Noma kunini, wamukele ukubonisana kwakho ~
U初海 Ungumbungazi ovelele